August 30, 2019 - ThutaStar
လိုက်လို့ မမှီတော့ဘူးအမေရယ် ပေါက်ဖော်ကြီးကတော့ တင်းတော့မယ်…
လိုက်လို့ မမှီတော့ဘူးအမေရယ်😘 ပေါက်ဖော်ကြီးကတော့ တင်းတော့မယ်😀 ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်ဖို့ကို တရုပ်ကြီးကအရမ်းလို့ချင်နေတာ ခုအမေက နော်ဝေးကိုခေါ်ပြီး ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီး ရေအားလျှပ်စစ်အတွက် အကောင်အထည်ဖော်တော့မယ်🤗 နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ နော်ဝေနိုင်ငံ SN Power ကုမ္ပဏီ၏ဘုတ်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ နေပြည်တော် သြဂုတ် ၂၉ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သည် […]
ကြည့်မိသူတိုင်းကို မျက်ရည်ကျစေတဲ့ “၀င်း နှင့် ဇော် အတွက် ကမ္ဘာမကျေဘူး ” သီချင်း (ရုပ်သံ )
လိပ်ကျွန်းလူသတ်မူနဲပတ်သက်လို့ သေဒဏ်ပေးခြင်းခံထားရတဲ့ မြန်မာရွေပြောင်းလူငယ်၂ဦးရဲ နောက်ဆုံးအယူခံကို ထိုင်းနိုင်ငံတရားလွှတ်တော်ချုပ်က သြဂုတ်လ၂၉ ရက်နေ့မှာပဲ သေဒဏ်အမိန့်ကို ပြန်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ် ဗြိတိန်သျှလူငယ်၂ဦး ဖြစ်တဲ့ Hannah Witheridge နဲ့ David Millerတို့ အသတ်ခံရတဲ့အမူနဲပတ်သက်လို့ မြန်မာလူငယ်နှစ်ဦးကို သေဒဏ်ချမှတ်ကြောင်း နွန်ထဘူရီခရိုင်တရားရုံးမှာ ကြားနာခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၄ခုနှစ်ကတည်းက ၅ နှစ်နီးပါးကြာခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ ဒီအမူကို […]
နှစ်လလောက်ခံစားခဲ့ရတဲ့ ဆင်တုတ်ကွေး ဒီဆေးနဲ့ ကောင်းသွားတယ်
ဆင်တုတ်ကွေးဖြစ်တာ ဒီဆေးနဲ့ ကောင်းကြတယ်တဲ့ အရမ်းပျော်တာပဲ နှစ်လလောက်ခံစားခဲ့ရတဲ့ ဆင်တုပ်ကွေးကြောင့်နာကျင်ရတဲ့ဝေဒနာတွေပြေးပြီလေ အိပ်ရာထတာနဲ့ ကိုယ်နဲ့ဘဝတူ ခံစားနေရသူတွေကိုဝမ်းသာအားရ သတင်းပေးရသေးတယ် မနေ့က facebook မှာ post တစ်ခုတွေ့တယ် ဆင်တုပ်ကွေးကြောင့်နာကျင်ကိုက်ခဲခံစားနေရသူတွေ Etoshine 60 ဆိုတဲ့ဆေးသောက်ရင်ပျောက်တယ်တဲ့ ဒါနဲ့ပဲ ဆေးဆိုင်ကိုပြေးဝယ်တာပေါ့ ဆိုင်ရောက်တော့ အာနိသင်တူတဲ့ဆေးပဲရှိတယ်ဆိုတော့လည်း […]
ဆက်သွယ်ရေး ကုမ္ပဏီတွေက ဖုန်းဘေကို မလျော်မကန်ဖြတ်တောက်နေလို့ ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ ဖိဖိစီးစီးကိုင်တွယ်လုပ်ဆောင်ဖို့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌက တိုက်တွန်း လိုက်ပါတယ်။ ဒီနေ့လွှတ်တော်မှာ အောင်မြေသာစံ မဲဆန္ဒနယ်က ဒေါက်တာဦးလှမိုးရဲ့ ဆက်သွယ်ရေး သုံးစွဲနေသူများအပေါ် စားသုံးသူ အခွင့်အရေးချိုးဖောက်နေတဲ့ ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီတွေကို ပြဋ္ဌာန်းပြီး ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ စားသုံးသူ အကာအကွယ်ပေးရေး ဥပဒေတို့နဲ့ […]
ဘာစီလိုနာနဲ့ စပိန်လက်ရွေးစင်အသင်းနည်းပြဟောင်း လူးဝစ်အင်းနရစ်က သူ့ရဲ့သမီးအငယ်ဆုံးလေး ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီလို့ ၀မ်းနည်းကြေကွဲစွာနဲ့ ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်မှုကြောင့် စပိန်ဘောလုံးလောကတစ်ခုလုံးတုန်လှုပ်သွားခဲ့ပြီး အင်းနစ်မိသားစုအတွက် နှစ်သိမ့်ဆုတောင်းမှုတွေကို လူမှုကွန်ယက်တွေကနေတစ်ဆင့် ပြုလုပ်နေကြပါတယ်။ ဘာစီလိုနာနဲ့အတူ ဂန္ထ၀င်မြောက် ဖလားသုံးလုံးအောင်မြင်မှုရရှိခဲ့ဖူးတဲ့ နည်းပြအင်းနရစ်ဟာ စပိန်လက်ရွေးစင်အသင်းကို ၂၀၁၈ ဇူလိုင်လက စတင်တာဝန်ယူခဲ့တာပါ။ ဒါပေမဲ့ နောက်ထပ် ၁၁ လအကြာမှာပဲ အင်းနရစ်ဟာ […]
မြန်မာ့ဆန်းကျမ်း ဗေဒင်ပညာရပ်၏ ငွေဝင်ထီပေါက် ကိန်းများထဲမှ ဆန်းဗေဒင်ဆရာကြီး ရန်ကုန်ကျော်ရင်၏ ငွေဝင်ခြင်း ထီပေါက်ခြင်း နည်းအရ ယခုမြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၈၀ အတွင်း (17.12.2018 မှ 17.12.2019 အတွင်း) ထီပေါက်ငွေဝင်ကိန်း ရှိမည့်သူများကို နေ့နံ အလိုက် အသေးစိတ် တွက်ချက်ပေးလိုက်ပါသည်။ တနင်္ဂနွေ သားသမီးများ အသက် […]
အတူအိပ်ပြီးမှ ချစ်သူမိန်းကလေးက အသက်မပြည့်သေးမှန်း သိခဲ့ရသူရဲ့ ဖြစ်ရပ်
အတူအိပ်ပြီးမှ ချစ်သူမိန်းကလေးက အသက်မပြည့်သေးမှန်း သိခဲ့ရသူရဲ့ ဖြစ်ရပ် တရုတ်​ပြည်​၊ ရှန်​ဟိုင်းမြို့က အသက်​ ၂၈ အရွယ် ​အမျိုးသား Lu ဟာ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ​တုန်းက အွန်​လိုင်း​ပေါ်မှာ ဂိမ်း​ဆော့ရင်း ချစ်​သူဖြစ်​ခဲ့တဲ့ ချစ်​သူ​ကောင်​မ​လေးကို အပြင်​မှာ သွား​တွေ့ပြီးမှ ချစ်​သူ​ကောင်​မ​လေးရဲ့ အသက်​ လိမ်​လည်​​ […]
၀င်းနဲ့ဇော် လွတ်မြောက်အောင် ဒီအချက်နှစ်ချက်ကို လုပ်ဆောင်ပေးနိုင် မှရမည်ဟု ထိုင်းရှေ့နေကြီးပြော….
လိပ်ကျွန်းအမှုရှေ့ဆက်ဖို့အတွက် ရှင်းလင်းချက် ” ယနေ့မှာ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ အမြင့်ဆုံးတရားလွှတ်တော်ချုပ်က လိပ်ကျွန်းအမှုမှ ဝင်းနှင့်ဇော်ရဲ့ အယူခံလွှာကို ပယ်ချပြီး ယခင်အတိုင်း ပြစ်မှုများကျူးလွန်သူအဖြစ်သတ်မှတ်၍ သေဒဏ်ကိုအတည်ပြုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ တရားစီရင်ရေးက အပြည့်အစုံပြီးဆုံးပါပြီ …။ ရှေ့ဆက်လုပ်စရာ ၂လမ်းပဲ ရှိပါတော့တယ်။ ပထမ၁လမ်းက ထိုင်းဘုရင်မင်းမြတ်ထံ ပြစ်ဒဏ်လျှော့ပေါ့ပေးဖို့ သနားခံလွှာတင်ဖို့ပါ။ ဒီလိုတင်မယ်ဆိုရင်တော့ […]
ဝင်းနဲ့ဇော်လိပ်ကျွန်းလူသတ်မှုမှာ မြန်မာလူငယ် နှစ်ယောက်ကို တရားခံဖြစ်ကြောင်း သတ်သေပြနိုင်ခြင်းမရှိပဲ လေးနှစ်ကြာဖမ်းစီးထားပြီးနောက် ယနေ့နောက်ဆုံးအယူခံကို ထိုင်းအစိုးရကပယ်ချကာ သေဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်…. စတင်ဖမ်းစီးခံရစဉ်ထဲက အစိုးရရော မီဒီယာများပါ ဝင်းနဲ့ဇော်အတွက် မတရားတဲ့ ပစ်ဒဏ်တွေအတွက် ဖော်ပြခြင်း ကာစီးပေးခြင်း ကာကွယ်ပေးခြင်း လုံလောက်စွာမရှိခဲ့ပါဖူး…. လိပ်ကျွန်းလူသတ်မှုမှာ မြန်မာလူငယ် နှစ်ယောက်အတွက် မြန်မာHacking အဖွဲ့တွေ ပါဝင်ကူညီတော့မယ် […]